Trace: • malagasy
MIARAKA AMIN'NY MPIVAROTRA VEGAN.
Inona no dikan'ny hoe Vegan?
Ny maha-Vegan dia midika fa raha lehibe araka izay azo atao dia tsy manimba biby mihitsy isika.
Toherinay ny hetsika fanohanana izay misy famonoana biby na fanararaotana noho ny antony tsy ilaina.
Filôzôfia Vegan & fifantohana ara-politika. Ny Vegan dia manohitra ny fananahana, ny jono, ny fihazana, ny fandrika ary ny fiompiana biby, indrindra ny fiompiana ozinina.
Na eo aza ny asan'ireo mpiaro ny zon'ny biby dia mbola araraotin'ny olombelona ihany ny biby mba hahazoany tombony manokana.
Ny antoko Vegan dia te hiaro ny biby amin'ny ain'ny fanandevozana sy ny fahafatesana mba ho tonga sakafo.
Mino ny fahalalahana amin'ny zavamananaina rehetra izahay & amin'ny alàlan'ny Veganism dia afaka manamboatra ny tsy fitovian-kevitra isika amin'ny alàlan'ny fanodinana vola izay mety hiteraka fahavoazana amin'ny biby amin'ny fomba hafa.
Namorona ny The Vegan Party izahay mba hahafahan'ny tsirairay mampiroborobo sy manaparitaka ny zavamaniry.
Tsy mila misoratra anarana ianao, kitiho fotsiny ny edit & try.
Ny fanovana rehetra natao tamin'ity tranokala ity dia tsy fantatra anarana, azafady azafady mba misy olona afaka manova ny pejy HTML ary manisy kaody ny mpanaraka azy na mitrandraka azy, raha mahita heloka ianao dia atoroy izany, raha tianao hampiseho ny anaranao ny fanovana anao magmamorona kaonty.
Azonao atao ny mamoaka pejy anon na manaova fanovana anon miaraka na tsy misy kaonty, mitahiry ny IP an'ny fanovana rehetra manokana ny rafitra misy anay ary manimba azy ireo tsy manentana azy ireo izahay, tsy mamporisika zavatra tsy vegan izahay & indraindray mety hamafana an-tsitrapo na hiova ny pejinao na dia vegan aza .
Ireo pejy ireo dia mety misy zavatra izay mbola tsy nohajaina, azafady aza misalasala mampihena ny tenanao.
Tsy mihinan-kena ny zava-maniry, tsy misotro ronono biby, tsy mihinana atody biby na mihinana tantely tantely, tsy mividy volom-borona na hoditra tena izy ny Vegan.
Ny Veganism dia fampiharana ny fadiana amin'ny fampiasana vokatra biby, indrindra ny sakafo, ary ny filozofia mifandraika izay mandà ny toetran'ny biby ny entam-barotra.
Ny olona iray manaraka ny sakafo na filozofia dia fantatra amin'ny anarana hoe Vegan.
languages/malagasy.txt · Last modified: 2021/03/21 22:09 (external edit)